Oduu Ammee: Manni murtii walii galaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa, oolmaa har’aa waaree booda ooleen, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee: Manni murtii walii galaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa, oolmaa har’aa waaree booda ooleen,
Hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran Hospitaala dhuunfaafi hakiima dhuunfaa ofii fedhanitti geeffamuudhaan akka yaalaman ajaje. Hidhamtootni kun lagannaa nyaataa eegaluun isaanii halkan 34ffaa kan qabate yoo ta’u, hanga har’aatti Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii fi Abbaan Alangaa Federaalaa waliin ta’uun yaala fayyaa isaan dhorganii jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Manni murtii Olaanaa Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa, Hidhamtoonni kun bakka ofii fedhanitti akka yaalamaniof yeroo adda addaa murtii dabarsus murtiin isaa hin kabajamin tureera. Oliyyannaa Abbaan alangaa Federaalaa, ajaja mana murtii Olaanaa mormuudhaan fudhate sababeeffachuun, manni murtii walii gala Federaalaa guyyaa muraasa dura, murtii rakkisaa kan hojiitti hiikuun ulfaatu dabrasuunsaa ni yaadatama.
Ajaja mana murtii walii gala Federaalaa, kan hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran gara Hospitaala deemanii osoo hin taane, Hospitaalli Laandimaark gara mana hidhaa deemuun isaan haa yaalu jedhu dabarsuu mana murtichaa faana dhahuun, gareen Abukaattotaa ol iyyannoo mana murtii Dhaddacha Ijibbaataa Federaalaatti fudhachuu isaaniitiin, dhaddachi ijibbaataa har’a galgala kana, ajaja hidhamtootni kun ‘bakka fedhanitti geeffanuun yaalamuufi yaala hatattamaa argachuu qabu’jedhu dabarsee jira.
Oolmaa dhaddacha kanaa ilaalchisuun gurmuu Abukaattota keessaa kan OMN-iif yaada laate, Obbo Tuulii Baayisaan, mana murtii Federaalaa dhaddacha Ijibbaataa galateeffachuun, murtichi murtii sirriifi fayyummaa hidhamtoota siyaasaa kanaaf kan yeroosaa eeggatedhas jedhaniiru.
Iccitii kaadhimamaa dhuunfaa duuba jiru
Yeroo ammaa kana galmeen kaadhimamtootaa gaggeeffamaa jira. Kaadhimamaa tahee kan galmaa’u qaama lama. Innis kan dorgomuuf paartii tahee seeraan galmaa’ee fi nama dhuunfaa dha. Garuu warri dhuunfaan kun eenyu
Kaadhimamtoota dhuunfaa tahanii kanneen galmaa’an hedduun ajajaa fi kadhannaa Abiy Ahmediin dha. Namootni hedduun harkuma mirgaa PPti. Isaanis murtii PP Paarlamaa keessatti hin morman. Garuu addunyaa biratti sagaleen adda addaa paarlamaa keessa jira jedhama. Iccitiin dabalataa hanna sagaleeti. Filannoo keessatti tooftaa ittiin sagaleen ittiin hatamuu fi qisaasamu keessaa inni guddaan tokko kana. Bakka paartii dogomaa cimaan jirutti kaadhimamaa dhuunfaa dhiyeessuun sagalee argate gurgura.
Kanaanis bakka sanatti PPn akka injifatetti gabaafama. Kun hundi shiraa fi hatna tahuun ifa. Filannoo dharaa, shiraafi fakkeessaa keessatti hin hirmaannu kan jennu keessa isaa beekna. Kan filannus tokkicha. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaati. Kanaaf hunduu tumsuu qaba.
Wabiin nagaa lammiilee Oromiyaa MCBOti
Qeerroo Intelligennce Group